Hery Rajaonarimampianina : «Nahazo tsodrano tamin’ny vahoakan’Ambositra » -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : «Nahazo tsodrano tamin’ny vahoakan’Ambositra »
Maro ny ezaka efa vita teto amin’ny firenena raha ny fampandrosoana no resahina hoy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nandritra ny diany tany amin’ny kaomina ambanivohitra kianjandrakefina, distrikan’Ambositra, faritra Amoron’ Imania, noho izany dia tokony ho sarotiny ny vahoaka rehetra manoloana ny paikady izay entina handotoana sy handravana izany « tazony izay ezaka efa vitantsika izay, aza avela potehina ny ezaka efa nataoko niaraka taminao mijoro manohitra ny herisetra, mijoro manohitra ny tsy rariny, mijoro mitaky ny ara-dalàna manaraka ny lalàm-panorenana manaraka ny fifidianana » hoy hatrany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Sarotiny amin’ ny asa fampandrosoana tokoa ny filoham-pirenena malagasy, ary sahy ny nanao fanamby amin’ny fampitahana amin’ny asa izay efa vita « sahy milaza aminareo ao fa vonona ny hifampitaha amin’ny teo aloha rehetra raha ny zava-bita no heverina, sahin’izany isika. Ka izao dia eo amin’ny asa no aoka hifampitsarantsika rehetra. Ny safidinao dia aza avela ahodinkodin’ny olona fa ianao no aoka haneho izany amin’ny alalan’ny latsa-bato» hoy ny filoha nametraka ny fanamby ho an’ ny vahoaka.
Noho izany hoy ny Filoham-pirenena dia ny tombontsoan’ ny maro no tokony hojerena , ary izany dia tafiditra indrindra anatin’ny fitiavan-tanindrazana « ny hambom-po iraisana no tsy ampy eto madagasikara samy mijery ny eo akaikiny , samy mijery ny tombontsoan’ ny antokony fotsiny …..tsy ampy olona tena tia tanindrazana isika. Miantso anao ry tanora, mpamokatra, mpiara-monina banjino ny firenena ao anatin’ny fitiavan-tanindrazana. Aza miangatra hajao ny lalàna » hoy hatrany ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Noho izany hoy ny filoha dia fantatry ny filoha ny marary ny vahoaka, ary fantatry ny filoha ny fahantrana nihatra tamin’ity firenena ity nandritra ny 50 taona mahery noho izany ny lalana tokony hizorana dia tsy hiverina anatin’ny korontana intsony, tsy mivery anatin’ny Tetezamita intsony, tsy miverina anatin’ny fahantrana intsony fa hitondra kosa anatin’ny lalana marina ho an’ ny amin’ ny fampandrosoana.
Nandritra ity lanonana ity , dia nomen’ireo ray amandreny tsodrano ny Filoha Hery Rajaonarimampianina . Tsodrano avy amin’ny vahoakan’Ambositra iray manontolo izany. Nisy ny tehina nomena ny Filoha ho marik’izany.